Iyo nyowani vhezheni yeSolus 4 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo | Linux Vakapindwa muropa
Iyo nyowani vhezheni yeSolus 4 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo
Munguva pfupi yapfuura kuvhurwa kweshanduro nyowani yekuparadzirwa kweSolus 4 kwakaziviswa. solus kugovera kwakazvimirira kweLinux iyo isingabvi pamapakeji kubva kune kumwe kugovera uye kuti ine kuvandudzwa kwenzvimbo yayo yedesktop nharaunda "Budgie".
Iyo kodhi yezvekuvandudzwa kweprojekti inogoverwa pasi pechirevo cheGPLv2, iyo C uye Vala mitauro inoshandiswa mukusimudzira.
Uyewo, Solus inopa dzimwe shanduro neGNOME, KDE Plasma, uye MATE desktops.
Kugadzirisa mapakeji, shandisa eopkg package maneja (Pardus Linux forogo PiSi), iyo inopa zvakajairwa maturusi ekuisa / kubvisa mapakeji, kutsvaga zvinyorwa, uye kugadzirisa zvinyorwa.
Iyo Budgie desktop inoenderana neGNOME matekinoroji, asi inoshandisa iyo GNOME's shell, pani, applet, uye yekuzivisa system iko kuita kweShell.
Budgie shandisa iyo Budgie Window Manager hwindo maneja (BMW), kunova ndiko kuwedzeredzwa kuchinjiswa kweMutter plugin.
Solus inonamatira kune yakasanganiswa modhi yekuvandudza, zvinoenderana nekuburitswa kukuru kunopihwa nguva nenguva, uko matekinoroji matsva nekuvandudzwa kwakakosha kuri kuratidzwa uye munguva iri pakati pekuburitsa kwakakosha, kugovera kunogadzirwa uchishandisa nharembozha yekumutsiridza pasuru.
1 Solus 4 mainhau
1.1 Desktop zvinowedzera
Solus 4 mainhau
Iwo makuru ekuvandudza muSolus 4 ane chekuita nekuendeswa kweiyo nyowani vhezheni yeBudgie 10.5 desktop, ichivandudza dhizaini uye kugadzirisa iyo software shanduro.
Neichi chitsva kuburitswa kwaSolus 4 desktop nyowani yekumisikidza modhi inokurudzirwa "Caffeine Mode", Ndeipi nekutadza inokiya otomatiki shanduko yekurara mode, inoremadza kutanga kwescreensaver uye kupenya kwescreen kunowedzera kusvika pakukwirira kana mushandisi-yakatarwa kukosha.
IconTasklist applet yakagadziridzwa, mairi kurongedzwa kwemahwindo akasiyana echishandiso chimwe chete kwakagadziridzwa uye nyowani yemenu yemenyu yakawedzerwa, yakaratidzirwa kunyorera mune anomhanya mabasa runyorwa.
Kuburikidza neyakarongwa pop-up menyu, unogona kuvhara ese windows echisarudzo chakasarudzwa kamwechete, maneja windows, isa / bvisa iyo application kune ako aunofarira, tanga new application windows, nezvimwe.
Kuwedzera kuburikidza nemenyu nyowani zvakare kugona kukumbira zviitwa-zvakasarudzika zviito, sekuvhura yakavanzika hwindo muFirefox inoitwa kana kuvhura chinongedzo kunyora mutsva meseji muGeary.
Kune rumwe rutivi, iyo ziviso system yakagadziridzwa. Kana zviziviso zvakapfuura zvaigona kungobviswa kamwechete, izvozvi zvakarongedzwa zvine chekuita nezvikumbiro uye zvinogona kubviswa zvakasarudzika, senge yega pachishandiswa chakasarudzwa.
Izwi rekudzora widget rakanyorwazve zvachose, Iyo yakakamurwa kuita maviri akasiyana mawijeti kuti ashande pamwe nekutora zvishandiso uye nezwi rinobuda zvigadzirwa.
Chikamu chakawedzerwa kuBudgie Desktop marongero ekugadzirisa setaira yekodhi, maikoni, uye madingindira eiyo maWidgets.
Zvakare sechikamu chakaparadzaniswa neBudgie Desktop Zvirongwa zvine Raven's dashboard marongero, senge mavhoriyamu miganho, manhamba evhiki, uye kutonga kwekuiswa kwemajeti akasiyana siyana.
MuBudgie Desktop Zvirongwa, chikamu chakaparadzaniswa chakawedzerwa chekugadzirisa windows, iyo inopa modes yekuisa pakati windows pachiratidziro, batidza mwenje wehusiku, uye gonesa kutarisa kana mbeva yafambiswa.
Nezve chikamu chatinowana:
Yakagadziridzwa vhezheni dze Firefox 65.0.1, LibreOffice 6.2.1.2, Rhythmbox 3.4.3 ine imwe paneli, Thunderbird 60.5.2, MPV 0.16, ffmpeg 4.1.1 ine rutsigiro rweAV1 codec.
Iyo Linux kernel yakagadziridzwa kuita vhezheni 4.20, iyo yakaita kuti zvikwanise kupa rutsigiro rwehardware rwakavakirwa pa AMD Picasso uye AMD Raven2 machipisi, AMD Vega20, uye nekuvandudza kutsigira kwe AMD Vega10, Intel Kofi Lake, uye Intel Ice Lake.
Solus 4 inosvika neMesa 19.0 nerutsigiro rwePolaris GPU nyowani kubva ku AMD, Vega10, Vega20 uye VegaM.
Kana iwe uchida kutora iyo nyowani vhezheni yeSolus 4, iwe unongofanirwa kuenda kune yayo yepamutemo webhusaiti uye muchikamu chayo chekurodha uchawana zvinongedzo zveimwe neimwe yemhando dzakasiyana dzeSolus desktop nharaunda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Iyo nyowani vhezheni yeSolus 4 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo
Nhau dzakanaka kwazvo kune avo vedu vanonyatsoteedzera shanduko yekuparadzirwa uku, iyo yakawira pasi pevashoma pane iye asina basa muvambi Ikey Doherty. Zvishoma nezvishoma inopora uye inodzokera kune yayo mutinhimira, kunyanya zviuru zvevashandisi vaive vasiya vachifunga kuti zvese zvaizotambisa, zvese zvinoita senge zvinoratidza kuti zvinhu zvava kudzoka zvakajairika.
Kuremekedza maonero, iri rakanakisa chirongwa senge imwe nzira yeGnome Shell.
Dropbox inoganhurira kuwana yemahara kune yayo sevhisi kune asingasviki matatu madhizaini